Akụkọ & vidiyo |
Asambodo & Onyinye
Ibu Ọrụ nke Social
Battery Pack site na ngwa
Batrị Elektronik Batrị
Batrị Nchekwa Batrị
Batrị ụgbọ ala eletrik
Batrị ngwá ọrụ batrị
Batrị nnọchi maka Lead acid
Batrị ọkụ batrị
Li-Ion batrị mkpọ
3.7V Li-Ion mkpọ
7.4V Li-Ion mkpọ
11.1V Li-Ion mkpọ
14.8V Li-Ion mkpọ
18.5V Li-Ion mkpọ
24V Li-Ion mkpọ
36V Li-Ion mkpọ
48V Li-Ion mkpọ
60V Li-Ion mkpọ
72V Li-Ion mkpọ
LIFEPO4 ATLỌ AKWATKWỌ
3.2V LiFePO4 mkpọ
6.4V LiFePO4 mkpọ
9.6V LiFePO4 mkpọ
12V LiFePO4 mkpọ
24V LiFePO4 mkpọ
36V LiFePO4 mkpọ
48V LiFePO4 mkpọ
60V LiFePO4 mkpọ
72V LiFePO4 mkpọ
Akụkọ & vidiyo
Ihe omuma Battery
Vidio ụlọ ọrụ
Ihe kpatara mputa batrị lithium polymer na ụzọ ndozi
site ha na 21-07-26
Ihe kpatara mpịakọta batrị lithium polymer bu nsogbu 1. Nsogbu nke nrụpụta nke ngwugwu batrị lithium, mkpuchi electrode abụghị otu, na usoro mmepụta ahụ siri ike; 2. Mmeghari mkpirisi dị mkpirikpi na-eme ihe ike na-ekpo ọkụ, nke na-akpata electr ...
Kedu ọrụ na-ezighi ezi nke batrị lithium polymer?
Polymer batrị bụ otu n'ime batrị ọhụrụ dị ike, mana mgbe ị na-emepụta batrị polymer, ọ ga-agwakwa gị ọrụ na-ezighi ezi nke batrị lithium polymer. Usoro ọrụ ndị a adịghị mma. 1. Igwe ihe nkiri aluminom-plastik n’elu batrị polymer enweghị ike ịbụ maliciousl ...
Kedu otu esi ahọrọ batrị e-cigare?
site ha na 21-07-19
Nnyocha ahụ chọpụtara na 80% nke ihe ọghọm metụtara nrụrụ batrị sịga, ọkachasị mgbe batrị na-ebu ọkụ. Dị ka akụkọ si n'aka ndị ọrụ ọkụ US, ọtụtụ ọkụ na mgbawa nke e-ese siga na-emetụta batrị e-cigare. Ya mere, ...
Kedu usoro nrụzi maka batrị 18650
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ batrị lithium eji arụ ọrụ n'ọtụtụ obere batrị bụ batrị 18650, na-ebute asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ. Arụ ọrụ nke batrị lithium nke ndị nrụpụta mepụtara adịghị mma, ha na-echekarị ọdịda ọdịda akụrụngwa. Yabụ kedu usoro mgbake maka lithi 18650 ...
E-sịga batrị nchekwa nchekwa
site ha na 21-07-12
Ebe ọ bụ na nkà na ụzụ nnu nicotine na-ewu ewu, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ e-siga na-enwe ọganihu dị elu na teknụzụ obere sịga. Nnọọ ewu ewu na ahịa ugbu a Na mgbakwunye na nkwalite nke teknụzụ atomization, ndị na-ere ike nke akụrụngwa nwere cha ...
Kedu otu esi arụ ọrụ ma debe batrị lithium-ion nke oriọna nke ọma?
Batrị Lithium-ion maka oriọna nke anyanwụ na-enwewanye ihu ọma site na ụdị ndụ niile maka nchekwa ike ha, enweghị mmetọ na-enweghị mmetọ, nchekwa, na mma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụlite ọkụ nke anwụ nwere ike iji rụọ ọrụ nkịtị, a ga-echekwa batrị lithium-ion nke ọma. N'oge a rụnyere ...
site ha na 21-07-05
E jiri ya tụnyere batrị-acid acid, kedụ uru dị na batrị lithium light street?
● Lithium pere mpe, fechaa ma dịkwa mfe ibufe. E jiri ya tụnyere sistemụ nchekwa batrị lithium na teknụzụ batrị gel-acid a na-eji eme ihe na oriọna nke anyanwụ na otu ike ahụ, ịdị arọ ya bụ otu ụzọ n'ụzọ atọ na oke ahụ bụ ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ. Dị ka nke a ...
site ha na 21-06-28
Gịnị bụ polymer lithium batrị na gịnị bụ uru ya?
A na-akpọkwa lithium polymer polymer batrị polymer: E jiri ya tụnyere batrị ndị gara aga, ọ bụ batrị kemịkal nwere ike dị elu, obere nha na ibu ọkụ. N'ihe banyere ọdịdị, batrị lithium polymer nwere njirimara dị oke mkpa, enwere ike ịme batrị nke ụdị ụfọdụ ...
Kedu usoro ịgba ụgwọ ziri ezi maka batrị lithium?
site ha na 21-06-21
1. Nchaji Nsogbu na-arụ ọrụ voltaji nke batrị lithium bụ 2.8 ~ 4.2V, dị ala ma ọ bụ karịa karịa ọkwa volta a, ion ion lithium dị na batrị ahụ na-ejighị n'aka, ọbụnakwa na-ebute ihe ọghọm. Iji hụ na batrị dị na nchekwa, achọrọ chaja pụrụ iche. Ndị chaja a ...
Usoro mmezi ziri ezi nke batrị lithium
Generalkpụrụ niile dị mkpa a ga-agbaso mgbe ị na-eji batrị lithium bụ ụgwọ na-emighị emi na nkwụsị na-emighị emi, ya bụ, na-akwụ ụgwọ batrị lithium n'oge, echela ka batrị ahụ gwụ ma kwụghachi, nke na-emerụ ndụ batrị ahụ. Batrị Lithium Na mgbakwunye ...
12345 Osote> >> Peeji 1/5
SOSLLI nwere usoro batrị emepụtara nke ọma, ụlọ ịka nká, ihe nyocha BMS, 100v nnukwu ihe batrị batrị li-ion, akụrụngwa ọkụ na-arụ ọrụ, igwe na-arụ ọrụ akpaka na ebe nyocha.
3.6v Lithium Ion Battery Pack, Batrị Li-Polymer, 60v Lifepo4 Batrị Pack, Ngwunye Batrị 60v, Cylindrical Li-Ion Batrị, 60v Lithium Batrị Pack,